Chigadzirwa gallery Vagadziri uye Vatengesi - Yakachipa Chigadzirwa gallery fekitori
Brass chiwanikwa chakaumbwa nemhangura uye zinc, uye chinhu chakanakira zvinhu zvekugadzira CNC michina zvikamu (kusanganisira CNC mamirimita zvikamu).
Aluminium alloy die-cast zvigadzirwa zvinonyanya kushandiswa mune zvemagetsi, mota, mota, midziyo yemumba uye mamwe maindasitiri ekutaurirana. Mimwe yepamusoro-soro, chaiyo-chaiyo, yakasimba-yakasimba simbi yezvigadzirwa zvealuminium inoshandiswawo mumaindasitiri ane zvinodiwa zvakanyanya senge ndege huru nezvikepe. Iko kushandiswa kukuru kuchiri muzvikamu zveimwe michina.
Ndarira inguruve yemhangura ine zinc seyakanyanya alloy pamwe neanogadzira zvinhu. "Punch tsvuku" iri chaizvo inopisa extrusion maitiro.
Kanda alloys emhangura akapatsanurwa muzvikamu zviviri, zvinoti ndarira nendarira. Ndarira inguruve yemhangura ine zinc seyakanyanya alloy pamwe neanogadzira zvinhu.
Izvo zvikamu zvikuru zvesimbi isina simbi ndeye kabhoni, chromium, nickel, uye zvimwe zvinoriumba zvinhu zvakaita se molybdenum, mhangura, uye nitrogen zvinowedzerwa. Chinhu chikuru chinobatanidza zvinhu musimbi isina chinhu ndiCr (chromium), uye chete kana zvirimo zveCr zvasvika pane imwe kukosha, iyo simbi inorwisa kuramba. Naizvozvo, simbi isina simbi inowanzo kuve neinosvika 10.5% yeCr (chromium).
Brass chiwanikwa chakaumbwa nemhangura uye zinc, uye chinhu chakanakira kugadzira zvigadzirwa zvemuchina (kusanganisira zvikamu zvekugadzira). Kufa kukanda kunopfupikiswa sekugadzira, inova nzira yekukanda iyo yakanyungudutswa chiwanikwa mvura inodururwa mukamuri yekudhinda, iyo mhango yesimbi muforoma inozadzwa nekumhanyisa, uye iyo alloy mvura inosimbiswa pasi pekumanikidzwa kuti iite kukanda. Kubatsira kwaOuzhan kwagara kuri kugadzirisa mavharuvhu emhangura, ndiko kuti, mavhavha akagadzirwa nemhangura, ari zvikamu zveindasitiri. Maitiro ekugadzira akatanga kugadzirwa naNingbo, Zhejiang kuChina.
Carbon simbi ndeye iron-kabhoni chiwanikwa chine kabhoni zvemukati me0.0218% kusvika 2.11%. Iyo inonziwo kabhoni simbi. Kazhinji, zvakare ine shoma shoma yesilicon, manganese, sarufa, uye phosphorus.
Kukanda aruminiyamu chiwanikwa zvikamu
Aluminium alloy isiri-ferrous simbi mamiriro ezvinhu. Aluminium alloy ine yakaderera density asi yakasimba kwazvo simba, iri padyo kana kupfuura iyo yemhando yepamusoro simbi. Iyo ine yakanaka mapurasitiki uye inogona kugadziriswa kuve akasiyana profiles. Iyo ine yakanakisa magetsi kuitisa, kupisa kwemagetsi uye kurwisa kurora. Inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri uye mashandisiro ayo ndeyechipiri kune simbi chete.
Brass chiwanikwa chakaumbwa nemhangura uye zinc, uye chinhu chakanakira kugadzira zvigadzirwa zvemuchina (kusanganisira zvikamu zvekugadzira). Kufa kukanda kunopfupikiswa sekugadzira, inova nzira yekukanda iyo yakanyungudutswa chiwanikwa mvura inodururwa mukamuri yekudhinda, iyo mhango yesimbi muforoma inozadzwa nekumhanyisa, uye iyo alloy mvura inosimbiswa pasi pekumanikidzwa kuti iite kukanda.
Kugadzirwa kwepurasitiki kunosanganisira zvinhu zvakasiyana siyana zvinokodzera machining, nylon (PApolyamide), PC (polycarbonate), ABS (co-polyacrylonitrile-butadiene-styrene), PMMA (plexiglass, poly Acrylic methyl ester), polytetrafluoroethylene (F-4), epoxy (EP). Kana uchisarudza zvigadzirwa zvemadhizaini ekugadzira, akakodzera mapurasitiki enjiniya anofanira kusarudzwa zvinoenderana nenzvimbo yekushandisa uye zvinoenderana nezvinodiwa zveCCC zvakagadzirwa zvikamu.